Taliyihii Melleteriga Degmada Qanaxdheere Oo Lagu Dilay Weerar ka Dhacay Gobolka Bay.
Saturday July 15, 2017 - 13:13:11 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar xooggan lagu dilay saraakaal katirsanaa maamulka 'Koonfur galbeed' ee wada shaqeynta laleh xabashida itoobiya.
Sawir hore Maleeshiyaadka katirsan maamulka Shariif Sakiin
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in taliyihii ciidanka Melleteriga degmada Qansaxdheere iyo ciidamo ilaalo u ahaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka degmadaasi.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegtay in qarax ka dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha Qarnsaxdheere ay ku dishay Col. Cumar Macalin Xasan Cabdule oo ahaa Taliyaha ciidanka Melleteriga.
Wariye ku sugan gobolka Bay ayaa soo sheegay in qarax miino uu haleelay gaariga taliyaha kadibna waxaa xigay weerar dhabagal ah oo ay fuliyeen ciidamada Xarakada SHM, weerarka iyo qaraxa ayaa sababay dhimashada taliyaha guud ee melleteriga Qansaxdheere iyo laba askari oo ilaala u ahaa.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha ladilay uu maanta barqadii ka amba baxay saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin gudaha degmada Qansaxdheere wuxuuna kusii jeeday garoonka diyaaradaha Macmalka degmadaasi oo lafilayay in diyaarad saad sidda kasoo degto.
Ku dhawaad 5 sanadood xiriir ah ayay hareereyn adag wajahayaan ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo Maleeshiyaadka dabadhilifyada ah kadib markii Xarakada Al Shabaab ay jartay dhammaan waddooyinka soo gala degmada Qansaxdheere, adeegsiga diyaaradaha ayaa ah marinka kaliya ee ufuran ciidamada Itoobiya inkastoo marmarka qaar ay dhulka adeegsadaan iyagoo isticmaalaya awood dheeri ah.